Ogaden Press Agency(OPA) News headlines from Ogaden,Ethiopia,Somalia,All Regions of Horn of Africa and the world. Gudoomiyaha ONLF Tahniyadd Ciid u diray Shacabka, Iyo Ciidanka Ogaadeeniya Kana Hadlay Ogaadeeniya.
Posted by Ogadentoday-Chief Editor on August 18 2012 09:38:04
(Ogadentoday Press)- Waxaan munaasabaddan ciida ee barakaysan aan salaam Bogaadin iyo Tahniyad xambaarsan u dirayaa, dhamaan umadda Muslimka ah ee maanta ciidaysa, gaar ahaan Shacabka Soomaalidda.Ogadenya iyo N/hurayaasha JWXO ee geesiyiinta ah iyo Reerahooda meel ay joogaanba. Salaantaas mid la mid ah waxaan u dirayaa, dhamaan inta qadiyadda shacabka Ogadeeniya ee xaqqa ah Taageersan.Waxaan Ilaahay inooga baryi, in uu inaga dhigo, kuwii waajibkoodii Soon sidii loo jideeyay u gutay. Ilaahay ha nagala mid dhigo kuwa soonkooda la aqbalay, dembigoodana la dhaafay, naartana laga xoreeyay. Aamiin.
Gudoomiyaha ONLF Tahniyadd Ciid u diray Shacabka, Iyo Ciidanka Ogaadeeniya Kana Hadlay Ogaadeeniya
Ciid wanaagsan Dhamaantiin.
(Ogadentoday Press)- Waxaan munaasabaddan ciida ee abarakaysan aan salaam Bogaadin iyo Tahniyad xambaarsan u dirayaa, dhamaan umadda Muslimka ah ee manta ciidaysa, gaar ahaan shacabka S.Ogadenya iyo N/hurayaasha JWXO ee geesiyiinta ah iyo Reerahooda meel ay joogaanba. Salaantaas mid la mid ah waxaan u dirayaa, dhamaan inta qadiyadda shacabka Ogadenia ee xaqqa ah taageersan.
Waxaan Ilahay inooga baryi, in uu inaga dhigo, kuwii waajibkoodii Soon sidii loo jideeyay u gutay. Ilaahay ha nagala mid dhigo kuwa soonkooda la aqbalay, dembigoodana la dhaafay, naartana laga xoreeyay. Aamiin.
Waalayaal, Munaasabadan Ciida Ramadaan, waxaan uga faa�idaysanayaa in aan idinla socodsiiyo in halganka shacabka S.Ogadenya ee Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogadenya (ONLF) ay hormuudka ka ahayd uu keenay guulo la taaban karo gude iyo dibadba. Waxaa hubaal noqotay in ciidamada & Shacbiga geesiga ah ee Soamlida Ogadenya ee gudaha Ogadenia ka hawlgala ay si joogto ah oon kala go�lahayn gobolada dalka oo dhan uga fuliyaan hawlgallo lagu guuleystay oo cadawga naafeeyey. Sida oo kale, in Bulshada Somalida Ogadenia ee JWXO ay hogaaminayso ee Dibadda ka hawlgala ay bilihii la soo dhaafay ee sanadkan gaar ahaan fuliyeen hawlo kacaan oo aad u qiimo badan oo gumeysiga quusiyay, hawlahaas oo dhinacyada kala duwan ee halganka wada taabanaya.
Anigoo magaca JWXO ku hadli, waxaan halyeeyada JWXO iyo dhamaan dadweynaha taageersan qadiyadooda xaqqa ah meel ay joogaanba u dirahayaa salaam gobanima doon oo kal iyo lab ah, waxaan ilaahay inooga ka baryi in uu gobanimada Ogadenia inoo soo dadajiyo.
Sidaad la socotaan, waxay warbaahinta Aduunka iyo gaar ahaan midda Geeska Afrikaba qorayeen, arin aan weli la xaqiijinin waxay ku dhamaatay oo la leeyahay, dhiigyacab Zanaawi kaalintiisii hogaamineed wuu baneeyay. Taasi hadday dhacdo, waxay ku keeni kartaa nidaamkii gumaysiga isbadal aan horay loo qorshaynin.
Waxaa kaloo la sheegayaa, in Wayaanihii TPLF ay ku kala qaybsan yihiin, ciddii Zanaawi badali lahayd, isla markaas ayna Tigreegu hogaanka xukunka cid kale u ogolayn. Qawmiyadihii xisbiga EPRDF ku midoobay, ma ogolaan doonaan sida la soo warinayo, in mar kale qof TPLF ah uu Zanawi xukunka dalka ka badalo.
Jabhadihii Gobanimo-doonka ahaa iyo kuwii mucaaridka ahaaba, waxaa muuqata in ay kooxo kooxo isugu ururayaan, si ay isbadalka iman doona, kaalin muuqata uga galaan. Qawmiyadihii badnaa ee Ethiopia, mid-waliba waxay u hanqal-taagaysaa in ay kaalinta ku haboon qaadato. Quwadihii shisheeye oo Maraykanku u horeeyo, ma doonayo in arinta Ethiopia faraha ka baxdo, oy sidii Somali oo kale noqoto, isla markaas ma jecla, in Zanaawi bedelkiisa, Tigree kale yimaado.
Warar faraha badan oo kala duwan oo iska soo wada horjeeda ayaa la soo warinayaa, waxaana suurtowda, in qarax-weyn oo dhibaato keeni kara ay dhaliyaan. Siday u suurtowdo, in ayna waxba dhicin , oo hawluhu habkoodii hore ku socdaan.
Umad ahaan waxaan ka mid nahay kuwa uu isbadalkani saamayn doono, Sidaa daraadeed, si aynu uga gaashaamano, isbadal kasta oo ku iman kara gumaysiga Itobiya, waxaa la�inooga baahan yahay in aan xoojino midnimadeena oon ka tashano aayaheena. Waa inuusan mar dambe masiirka shacabka Somalida Ogadenya gacan shisheeye galin. Waan awoodnaa arintaa, waanan gaadhaynaa Ilaahay idankii.
Odayaasha, salaadiinta, cuqaasha iyo wax-garadka umadda Somaaliyeed ee Ogadenya waxaa looga baahan yahay inay shacabka ku dhiirigaliyaan midnimo iyo isku-tashi. Waa in fikirkeena iyo awoodeena loo jeediyaa sidaan ku gaadhi lahayn xoriyadeena oon ula sinmi lahayn shucuubta Geeska Afrika ee Xorta ah.
Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogadenya waa urur loo asaasay danaha umadda oo maal iyo nafba u huray siduu umadda Somaliyeed ee Ogadenya uga xoreyn lahaa Gumaysiga. Caalamka waxaa laga ogaaday maanta inuu jiro shacab Somali ah oo ku nool Geeska Afrika oo Itobiya ay gumaysato oo u halgamaya xaqooda aaya-ka-tashi. Waxaa meesha ka baxay beentii Itobiya ay caalamka galisay tobanaanka sano ee ahaa in Qadiyadda Ogadenya (The Ogaden Issue) ay tahay muran xuduudeedka Afrika oo idil ka dhex taagan. Arintaasi kuma imaanin baryo iyo fadhi-ku-dirir ay waxay ku timid naf iyo maal loo horey qadiyadan.
Ugu dambayn; qofkii dambi ka galay dadkiisa iyo dalkiisa waa inuu ka waantoobaa oo faraha kala baxaa falalka dambiga ah een aduun iyo aakhiro midkoodna waxba tareynin. Waxaa bilaaban doona baal iyo taariikh cusub. Qofkii ku sii dhaga adeyga u adeega gumaysiga waxaa hubaal ah in goor ay noqotaba talaabada ku haboon laga qaadi doono.. Qoraalkan waxaa Warbaahinta Ogadentoday Press soo gaarsiiyay ONA.